एक विद्यार्थीको विदेश भ्रमणका लागि त्रिविको परीक्षा सार्न पत्राचार ! - Everest Dainik - News from Nepal
एक विद्यार्थीको विदेश भ्रमणका लागि त्रिविको परीक्षा सार्न पत्राचार !
याे पनि पढ्नुस विद्यार्थी सिट संख्या तीन सयः भर्ना १०,८६८
आगामी २७ जेठमा हुने परीक्षा पछि सार्नका लागि क्याम्पस प्रशासनले नै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुलाई पत्राचार गरेको छ । क्याम्पस प्रमुख डा। डिएन पराजुलीले एक विद्यार्थी भए पनि सकेसम्म परीक्षा नछुटोस् भनेर बल्खुलाई पत्राचार गरेको बताए । ‘एकजना विद्यार्थी भए पनि हाम्रै विद्यार्थी हुन्, सकेसम्म परीक्षा मिस नहोस् भनेर पत्र लेखिएको हो, बल्खुले के गर्छ थाहा छैन,’ क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले भने ।
याे पनि पढ्नुस न्यायालयको लागि २०७४ दुर्भाग्यको वर्ष
अन्य केही विद्यार्थीले भने परीक्षा नसार्न दबाब दिएका छन् । क्याम्पस प्रमुख पराजुलीलाई भेटेर उनीहरूले परीक्षा सार्दा सबै विद्यार्थीको काम र मानसिक रूपमा समेत असर पर्ने बताएका थिए । बिएएलएलबीमा नेपाल ल क्याम्पसमा मात्र एक सय पाँच विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । देशभर त्रिविका तीन कलेजमा बिएएलएलबीको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: Nepal Law Campus